Baraha Bulshada Ma Daaweyn Karaa Murugada? | Martech Zone
Talaado, Agoosto 21, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Ku calaamadee Earl's buugga, Herd, ayaa ii ahaa aqrin adag. Ha u qaadin taas qaab qaldan. Waa buug la yaab leh oo aan ka helay Hugh McLeod's blog.
Waxaan idhi 'adag' maxaa yeelay maahan aragti 10,000 oo lug ah. Xayawaanka (Sida loo beddelo dabeecadda ballaaran iyadoo laga faa'iideysanayo dabeecadeena dhabta ah) waa buug kakan oo si faahfaahsan u faahfaahinaya daraasado fara badan iyo xog si loola yimaado aasaaska asaasiga ah. Sidoo kale, Mark Earls maaha iskucelceliska qoraaga buugga ganacsiga - aqrinta buugiisa waxay iga dhigeysaa inaan dareemayo inaan aqrinayo buug gebi ahaanba ka baxsan horyaalkeyga (runti waa!). Haddii aad tahay qof aqoonyahan ah oo qadarin qoto dheer, fikir qoto dheer iyo shuruudaha taageeraya - kani waa buuggaagii.
Haddii aad u maleyneyso aniga oo kale, waa buug weyn sidoo kale. Might Waxaa laga yaabaa inaan jarjaro qaar ka mid ah waxyaabaha hodanka ah anigoo wax ka qoraya halkan, laakiin waa maxay xumaanta! Waan u socdaa
Hal mowduuc oo Mark taabto waa niyadjab. Mark wuxuu xusayaa laba waxyaalood oo caan ah oo keena niyad-jabka - xiriirka waalidiinta ee ilmahooda iyo xiriirka qofka ee dadka kale. Kama caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay haddii Warbaahinta Bulshadu aysan ahayn tan ugu fiican ee lagu beddelan karo Prozac daaweynta cudurada bulshada sida diiqadda. Warbaahinta Bulshadu waxay keentaa ballan qaad ku xirnaanshaha kuwa kale ee aan ka baxsanayn agagaarahaaga xaafadda sida guriga, xafiiska, ama xitaa xaafaddaada.
Twitter, WordPress, Facebook, Isu soo uruuri, Ciyaaraha khadka tooska ah applications dhamaan barnaamijyadan maahan kuwo fudud 'Web 2.0', waa macnahoodu yahay isgaarsiinta midba midka kale. Layaab ma leh sababta codsiyada bulshada ay caan u yihiin. Miyaanay wax badan ka fududayn in dadka loo furo nabadgelyada internetka ee innaga dhexeysa?
Shir bilo ka hor socday, waxaan ku xasuustay haweeney weydiisay:
Waa ayo dadkani sidee bayse u yihiin khadka tooska ah saacadaha oo dhan maalintii? Miyaanay nolol haysan?
Waa aragti xiiso leh !, saw maahan? Waxaan ka shakisanahay taas dad badan, tan is noloshooda. Tani waa xiriirka ay la leeyihiin kuwa kale, hiwaayadaha ay jecel yihiin, danahooda, asxaabtooda iyo taageeradooda. Waagii hore, 'kelinimo' runti waa inuu keligiis noolaado. Laakiin maanta, 'kelinimo' maahan inay qasab tahay! Isaga / iyadu waxay ka heli kartaa kelinno kale oo isku hiwaayad ah!
Qaarkood waxay ku doodi karaan in noocan ah shabakadda 'bulshada' iyo shabakadda badbaadadeed ee la socota aysan u fiicnayn sida xiriirka dhabta ah iyo xiriirka aadanaha. Waa laga yaabaa inay sax yihiin… laakiin ma hubo inay dadku u tixgelinayaan tan beddel ahaan. Dad badan, tan is waxa kaliya ee ay ku wada xiriiri karaan.
Dugsiga Sare saaxiibkey, Mark, wuxuu ahaa farshaxan yaableh. Wuxuu ahaa nin weyn oo nin ah. Wuxuu lahaa garka buuxa fasalka 10aad wuxuuna qoray buugaag majaajilo ah oo ay kujiraan sheekooyin Vampires iyo Werewolves. Waan jeclaa la joogitaanka Mark laakiin marwalba waan sheegi karay inuu ku faraxsan yahay qof walba - xitaa aniga. Uma maleynayo inuu niyadjabsanaa gabi ahaanba, laakiin wuu iska aamusnaa marka laga reebo guuxa mararka qaarkood (Dib ayaan u ciyey).
Waxaan si daacad ah u qiyaasi karaa Mark inuu yahay farshaxan caan ah oo caan ah, hadda, ama laga yaabee inuu maanta cidlada ku nool yahay. Ma caawin karo laakiin waan yaabi karaa, in kastoo. Haduu Mark lahaa bog iyo bog uu ku daabaco sheekooyinkiisa cajiibka ah, waxaan u maleynayaa inuu ku xirnaan lahaa kumanaan kale oo isku dan ah. Wuxuu lahaan lahaa shabakad bulsheed - shabakad asxaab iyo taageerayaal dhiiri gelin iyo qadarinba leh.
Sinnaba ugama dhaadhacayo in annaga oo ah kuwa wax qora ay wax ka qorayaan qoraal ahaan. Waxaan sameynaa; si kastaba ha noqotee, ka faa'iideyso ixtiraam badan akhristayaashayada. Anigu kama duwana. Haddii aan arko qof gaangis ku qoraya baloogle kale oo aan saaxiib nahay, waan ku boodayaa oo difaacayaa. Haddii aan maqlo blogger xanuun ku dhacay, waxaan si dhab ah ugu duceeyaa isaga iyo qoyskiisa. Markuu blogger-ka joojiyo baloog garaynta, runtii waan u xiisay maqalkooda.
Ka shaqeynta 50 ilaa 60 usbuuckeena oo aan noqdo aabe keligiis, wax badan kama haysto "nolol" (sida ay ku qeexday haweeneyda aan sheegay) meel ka baxsan qoraalladayda iyo shaqadayda. Si la yaab leh, in kastoo, my nolosha khadka tooska ah waa mid si aad ah u taageeraya, faraxsan oo rajo leh. Runtii waxaan ahay nin faraxsan (oo aan daawo lahayn laakiin miisaankiisu culus yahay). Ma aaminsani inaan isku dayayo inaan mid kale ku beddelo. Waxaan u maleynayaa in labaduba ay yihiin kuwo muhiim ah oo abaal marin leh. Xaqiiqdii, waxaan aaminsanahay in noloshayda 'khadka tooska ah' ay igu riixday inaan noqdo xiriiriye kafiican noloshayda 'dhabta ah'. Waxay ii tahay daaweyn qoritaan waxayna dareemeysaa wax weyn markaan helo jawaab celin ku saabsan qoraalkayga (xitaa haddii ay xun tahay).
Runtu waxay tahay, haddii aanan haysan shabakadda taageerada ee aan kula jiro dadyowga… Malaha waayeen aan faraxsanayn oo aad ku dhici karto niyad jab. Waxaan u maleynayaa inaan ciyaari lahaa fiidiyowyo fiidnimo ah oo aan saaxiibaday ka dhigayo kuwo murugo leh maalintii.
Waxaan aad u jeclaan lahaa in aan qaato kaniinigeyga 2.0 maalin kasta.
Tags: dhaqankaniyad-niyad-jabkajiranacalaamadaha dhegahadhaqanka internetkadhaqanka warbaahinta bulshada
Agoosto 21, 2007 saacaddu markay ahayd 10:11 PM
Marka hore ma aaminsani in websaydhka bulshada ee '2.0' ay ka mid yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin Twitter, baloogyada iyo wixii la mid ah meel kasta oo u dhow daawo loogu talagalay waxyaabaha sida murugada oo anigu si khaldan uma aqbalayo Sababta Mark ee sababaha niyadjabka.
Taasi waxay tidhi si kastaba ha noqotee waxaan aaminsanahay in siyaabo ka mid ah isdhexgalkayaga shabakada uu ka caawiyo qofka isku kalsoonidiisa, dareenka samaqabka xaaladaha qaarkoodna waxay ka caawiyaan qofka marxalado aad u adag noloshiisa. Waan u qalmi doonaa taas inkasta oo aanan dhigin baloogyo la mid ah Twtitter iyo wixii la mid ah (Waxaan wax ka qaban doonaa mid ka mid ah maalmahan si dhakhso leh).
Tusaale ahaan qayb ka mid ah WinExtra sidoo kale waxaan leeyahay kanaalka IRC oo ah nus-casuumaad (gaar ahaan haddii aan ogahay in dadku runti ay sameeyaan IRC markii ugu horraysay) iyo mid ka mid ah saaxiibkayga ugu dhow sanadkii la soo dhaafay ayaa ogaaday inuu u baahan yahay inuu sameeyo nolol dhab ah Beddel si aad u dhaafto balwad. Wuu guuleystey - sidoo kale wuxuu ku guuleystey sida qofku ula qabsan karo balwad - laakiin wuxuu igu yiri maalin maalmaha ka mid ah haddii aysan ahayn kanaalka IRC iyo dadka halkaas jooga si daacadnimo ah uma uusan aqoon haddii uu taas ku sii mari lahaa. waqti aad u madow.
Mid ka mid ah kiis kale oo hadda dhacay mid ka mid ah muddooyinka dheer ee ka mid ah shirarka WinExtra iyo kanaalka IRC ayaa joojiyay dhajinta ama ka soo muuqashada kanaalka. Taa baddalkeeda laba xubnood oo Mareykan ah ayaa aad u walwalsan waxayna bilaabeen howsha isku dayaya inay la socdaan isaga si loo hubiyo inuu fiicanyahay. Hagaag maanta wuxuu si lama filaan ah uga soo muuqday kanaalka waxayna umuuqatay saaxiib mudo dheer lumay oo ugu dambeyn guriga ku soo noqday - labadiisaba iyo annaga.
Kani waa mid bulshada ka mid ah, in kasta oo aanu adduunka ku xirnayn shabakadda '2.0' ee shabakadaha bulshada waxaan la wareegi doonaa wixii ku saabsan Facebook ama Twitter bulshada markasta. Taas waxaa u weheliya waxaan u maleynayaa inay muujineyso in haddii bulshada internetka ay leeyihiin cimri dherer iyo saaxiibbo qoto dheer (taas oo haddii aad fahanto in shirarkeennu u yar yihiin sidii ay ahaan lahaayeen ilaa lix sano oo lagu daray) taasi waxay ka dhigeysaa qayb ka mid ah nolosha qofka fiicnaan oo wuxuu ku siinayaa dareen ah lahaansho - taas oo runtii ah waxa kaliya ee aan dad ahaan ka rabno nolosheena.
Aug 22, 2007 at 9: 37 AM
Waxaan ka digay in aan naafeeyay ereyada Mark… waxay u egtahay sidii aan sameeyay! Calaamadee tixraacyada maqaallada qaarkood ee ku saabsan niyad-jabka oo ha sheegin in kuwani ay yihiin dhab ahaan ilaha kaliya ee niyad-jabka - kuwani waa lamaane la soo sheegay. Aragtida baraha bulshada iyo fursadda lagu caawin karo murugada ma ahan tan Mark, waa mid aan aad ula yaabo.
Sheeko cajaa’ib leh oo ku saabsan bulshadaada waana kugu raacsanahay - lahaanshuhu waa aakhirka waxa qof walba ugu baahan yahay inuu caafimaad qabo. Waxaan u maleynayaa in Baraha Bulshadu ay nooga tagayaan furitaanka 'ka mid noqoshada' beelaha aan waligeen si kale u soo bandhigi lahayn.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka gaarka ah!
Agoosto 22, 2007 saacaddu markay ahayd 3:37 PM
Qoraal aad ufiican, Doug! Waxaan u arkaa isku xirka bulshada hab aan kula xiriiro jawiga iyo nolosha dad badan oo aan u arko inay saaxiibo yihiin, qaarkoodna xitaa saaxiibo dhow yihiin, oo saameyn ku leh nolosha kale ee aanan si kale u heli lahayn saacado igu filan maalintii oo aan sameeyo . Haddii aan arko saaxiib baahan, waxaan awoodaa inaan si dhaqso leh ula xiriiro si aan u arko waxa aan sameyn karo si aan taageero u siiyo. Waxaan sidoo kale kasbaday saaxiibo (adigu adigu kujiro!) Isgaarsiinta elektaroonigga ah ee haddii kale laga yaabo inaanan aqoon sidoo kale, taas oo iyaduna isu rogtay saaxiibtinimo qadla'aan sidoo kale.
PS waan u xiisay qoraaladaada maalinlaha ah intaad ku mashquulsanayd mashruucaaga iyo kala guurkaaga. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko qoraaladaada dhowaan!
Agoosto 22, 2007 saacaddu markay ahayd 7:45 PM
Mahadsanid Julie! Waxaan isku dayayaa inaan ku soo laabto xawaare wanaagsan laakiin waan dadaalayaa. Waxaan shaqeeyaa saacado badan waxaanan ku daray jimicsi (qiyaasi taas!) Isku darka. Wali maan fahmin qaaciddada saxda ah - aad ayaan ujecelnahay oo waan daalay.
Halkaas ayaan gaadhayaa!
Nov 19, 2007 saacadu markay tahay 3:37 PM
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay aragtida ah in adeegsiga baraha bulshada ay tahay wax fiican oo daaweyn ah. Aniga ahaan, waxaan ogaaday inay aad ufiican tahay oo xor u tahay inaan wax ka qoro dareenkayga. Xitaa haddii uusan qofna aqrin. Awood ayaa ku jirta in dhab ahaan la qoro. Waxaan kaloo jeclahay baraha sida Facebook iyo MySpace. Waxay u oggolaadaan dadka inay isku xirmaan wax ka badan inta ay la xiriiri karaan haddii aysan xiriirkaas lahayn. Waad ku mahadsantahay dhajinta macluumaadkan ku saabsan baraha bulshada. Waxaan rajeynayaa in dad aad iyo aad u tiro badani ay wanaagga ka dhex helayaan.
Nov 19, 2007 saacadu markay tahay 3:59 PM
Xaqiiqdii waxaan nahay xayawaan bulsheed, miyaynu ahayn Jason? Haddii aysan jirin awood aan ku wada dhaqanno, waxaan ku kalsoonahay inay taasi u horseedi karto jahwareer badan oo bulshada ah isla markaana u rogi karto arrimo kale.
Adiga oo kale, runtii waxaan u arkaa qoraal ahaan waalka sii deynta cadaadiska weyn. Sidoo kale, marka qof iiga mahadceliyo ama wax u qoro waxa aan qoray - taasi waxay cajaa'ib ku qabtaa kalsoonida qofka 'ol'!
Jul 23, 2008 markay tahay 3:18 PM
Waxaan dareemayaa in xanuunka niyadjabka dhab ahaantii la yareyn karo iyada oo ay sabab u tahay ka qeyb qaadashada howlaha warbaahinta bulshada. Eeg daraasadaha kiisaska ee shakhsiyaadka ka qayb qaata Nolosha Labaad tusaale ahaan. Waxay abuuri karaan avataar iyagoo ku saleynaya astaamaha jireed ee ay rabaan waxayna kula xiriiraan dadka heerarka ay waligood awoodi kari waayeen inay horey u sameeyaan. Taasi waa hal tusaale.
Anigu shaqsiyan goob joog baan uga ahaa sida baraha bulshada ay u caawin karto. Waxaan kormeerayay wadahadalada kooxda murugada ee MySpace si aan u falanqeeyo sida dadka u xanuunsanaya murugada, walwalka, laba-cirifoodka, OCD, iwm ay ugu tiirsan yihiin bulshooyinkan taageerada. Intii aan daawanayay sheekada oo muuqatay waxaan daawaday iyadoo shaqsi ka hadlayo inuu nafteeda wax yeelo. Bulshada ayaa isla markiiba soo booday oo ka caawisay inay ka baxdo. Waxay u egtahay in bulshada MySpace ay u dhaqantay sidii nolosheeda.
Waxaan u maleynayaa halka ay ku socoto warbaahinta bulshada waxaan arki doonaa adeegyo badan oo la heli karo oo loogu talagalay niches gaar ah. Bukaanka Aniga I like (macmiilkeygii hore ee aan baarista ku waday waqtigaas) wuxuu isu keenayaa dadka qaba noocyo kala duwan oo niyad jab ah si ay ula wadaagaan khibradooda isla markaana ay ula xiriiraan midba midka kale. Waa aalad layaableh oo kaliya waxay ku tusaysaa sida shabakadaha bulsheed ee awoodda leh ay u leeyihiin in cagaha dadka dhulka lagu hayo. Waxa ugu fiican ayaa ah shabakad bulsheed sida PLM oo keliya waxay u oggolaanaysaa dadka qaba xaalad inay ka mid noqdaan kooxda. Tani waxay si weyn u kordhisaa heerka kaqeybgalka maxaa yeelay way ogyihiin inaysan keligood ahayn.
Waad ku mahadsan tahay qoraalkan weyn Doug!
Jul 23, 2008 markay tahay 4:41 PM
Scott - aad baad ugu mahadsantahay ereyada wanaagsan iyo faallooyinka gaarka ah. Way fududahay in la arko tiknoolajiyaddan oo si wanaagsan loo adeegsanayo iyada oo loo marayo bogagga sida Bukaanka Aniga I like. Xidhiidh weyn oo aan gelinayo xiriirinteyda maalinlaha ah berri!
Agoosto 8, 2008 saacaddu markay ahayd 2:53 PM
Waxaan u maleynayaa in baraha bulshada ay dadka ka caawin karto la tacaalidda niyad-jabka, maxaa diidaya?
Falsafaddaydu waxay tahay in qof walba oo inaga mid ah, iyo wax kasta oo dhulka jooga ay wada xiran yihiin. Dhamaanteen waxaan ka soo wada jeednay hal il oo tamar ah, diiqaduna waa natiijo ka dhalatay dareemida inaan ka go'nay ishaas.
Haa waan ogahay waxaas oo dhami waxay u egyihiin agey cusub. Laakiin waa fikrad fudud, oo macno ayay ila samaynaysaa.
Uma maleynayo in warbaahinta bulshada ay tahay daawo, laakiin waxay isu keentaa dadka, waana taas waxa aan dhamaanteen ku jecel nahay jiritaankeena.
Inanteyda talaabo-qaadashada ah waxay waqtigeeda intarnetka badankeeda ku qaadataa goob la yiraahdo nexopia. Waxay la kulantay asxaab badan, gudaha iyo meelo kale oo ka tirsan barahan xiriirka bulshada. Baraha bulshadu waxay naga caawiyaan inaan la kulanno dad dano isku mid ah leh, waana aalad naga caawisa inaan xiriir la yeelano saaxiibbada hadda iyo kuwa hore.
Waxaan aqrinayay "Awoodda Hadda" ee Eckhart Tolle. Buugani wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa sababta aan u dareemno niyad jab, walwal iyo waxyaabo kale oo badan.
Wuxuu u soo bandhigayaa xalka "hadda ku noolaado" daawo ahaan. Waan ku raacsanahay, sidoo kale waxaan abaal marin u siinayaa buugan cid kasta oo danaynaysa hagitaanka caafimaad ee farxadda.